March 2008 | " မနာပဒါယီ "
။ အချိန် 3/25/2008 10:25:00 PM
မှတ်ချက်။ ဇီဝိတံ ဗျာဓိကာလော စ၊ ဒေဟနိက္ခေပနံ ဂတိ။ ပဉ္စေ တေ ဇီဝလောကသ္မိံ အနိမိတ္တာ န နာယရေ။ ဟူသော ပါဠိကို ကိုးကားရေးပါသည်။
။ အချိန် 3/23/2008 05:38:00 PM
ဦးတင်ပါတယ်ဘုရား…အဂ္ဂသာဝကအချို့ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့ ၀ဋ်ကျွေးခံရသေးတယ်။ အင်္ဂုလိမာလကောဘုရား…တပည့်တော်သိချင်ပါသည်ဘုရား။ နောက်ပြီး ယောနိသောမနသိကာရအကြောင်း ကိုလည်း ထပ်မေးချင်ပါတယ်ဘုရား။ တိုးတက်လိုသူတွေမှာ ရှိသင့်မရှိသင့်။ အောင်မြင်မှုဟာ ပြိုင်ဘက်ကိုအခြေပြုရင် ယောနိသောမနသိကာရက အတားအဆီး ဖြစ်မဖြစ်သိချင်ပါသည်ဘုရား။
A. မြတ်စွာဘုရားအပါအ၀င် အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်စတဲ့ အဂ္ဂသာဝကအချို့ ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုခင် နောက်ဆုံးဘ၀မှာ ၀ဋ်ကျွေးခံကြရတာမှန်ပါတယ်။ အဲဒီဝဋ်ကျွေးဟာ အတိတ်ဘ၀တစ်ခုခုက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ၀ဋ်ကျွေးများကို ယခုဘ၀မှာ ခံကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငရဲမှာအပ ၀ဋ်မှာအမြဲဆိုတဲ့ စကားလို ငရဲမကျအောင် တစ်ခြားကုသိုလ်ကောင်းမှုများ ကြိုးစားရင်းကာကွယ်လို့ ရပေမယ့် ၀ဋ်ကတော့ လွန်ဆန်လို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် တန်ခိုးတော်အရာမှာ ဧတဒဂ်ရတော်မူတဲ့ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်အရှင်မြတ်ပင် ခိုးသားငါးရာရဲ့ ရိုက်နက်မှုကို တန်ခိုးတော်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင် ရှောင်ထွက်သွားနိုင်ပေမယ့် သုံးကြိမ်မြောက်မှာတော့ မရှောင်တော့ဘဲ ၀ဋ်ကျွေးကို ဆပ်သွားတဲ့ သာဓကရှိပါတယ်။
အင်္ဂုလိမာလ မထေရ်မြတ်ကတော့ နောက်ဆုံးဘ၀မှာ ဆရာ့ကျေးဇူးကို ဆပ်ဖို့အတွက် လူးသားတွေကိုသတ်ပြီး လက်ညှိုးတွေဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ညှိုးပေါင်းတစ်ထောင်ပြည့်အောင် နောက်ဆုံးတစ်ချောင်းအတွက် ဘယ်သူလာလာ သတ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မိခင်ကလည်းသားကို တားမြစ်ဖို့သားရှိရာကို သွားနေတဲ့အချိန်ပါ။ အကယ်၍များ အမေကိုသတ်မိမယ်ဆိုရင်တော့ အင်္ဂုလိမာလဟာ ပဉ္စာနန္တရိယကံကြောင့် သေချာပေါက် အ၀ီစိငရဲကိုလားမှာပါ။ အဲလို မဖြစ်အောင်ဘုရားရှင်က ကြားက၀င်ပြီး ကယ်တင်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ကယ်တယ်ရတာဟာလည်း အင်္ဂုလိမာလဟာ အတိတ်အတိတ် ဘ၀က ဖြည့်ခဲ့တဲ့ ပါရမီတွေ ကုသိုလ်တွေရဲ့အစွမ်းနဲ့ ဒီဘ၀မှာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နိဗ္ဗာန်ဝင်ရမယ့် နောက်ဆုံးပစ္ဆိမဘ၀ိကပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ အဲဒီမှာ အင်္ဂုလိမာလဟာ ဘုရားတရားတော်နာပြီး သောတာပန်တည်ပါတယ်။ သောတာပန် တည်တာနဲ့တပြိုင်နက် အပါယ်လားစေနိုင်တဲ့ အကုသိုလ်တွေကို ပယ်သတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီလူတွေကို သတ်တဲ့ကံကြောင့် ပြန်ပြီးဝဋ်လည်တာတို့ မရှိတော့ပါဘူး။ တစ်ဘက်ကတွေးမယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီအသတ်ခံရတဲ့ သူတွေဟာလည်း အတိတ်ဘ၀တစ်ခုခုက ၀ဋ်ကျွေးကို ပြန်ဆပ်ရတာလို့ တွေးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါတောင် အင်္ဂုလိမာလဟာ ကြီးမားတဲ့ ၀ဋ်ကျွေးတွေကို မခံလိုက်ရပေမယ့် ရဟန်းဖြစ်ပြီး ဆွမ်းခံကြွတဲ့ အချိန်မှာ သူသတ်ခဲ့တဲ့ သူအချို့ရဲ့ မိသားစုတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ ၀ိုင်းပြီးခဲနဲ့ပေါက်တာတို့ ဆွမ်းလောင်းမဲ့သူ မရှိလို့ ဆွမ်းမရတာတို့ ကြုံရပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံးမီးမဖွားနိုင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးကို အင်္ဂုလိမာလသုတ်ဟောပြီး မီးဖွားပေးစေမှ ပြန်ပြီးလူတွေရဲ့ ကြည်ညိုမှုကို ရသွားပါတယ်။ အင်္ဂုလိမာလရဲ့ နောက်ဆုံးဘ၀မှာ ၀ဋ်ကျွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီလောက်ပဲ ခံရပြီး တစ်ခြားကြီးကြီးမားမား ခံရတဲ့အကြောင်း စာပေမှာ မတွေ့ပါဘူး။
ယောနိသောမနသိကာရ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို စာပေအတိုင်း တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုရရင် “အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းခြင်း” လို့ ပြန်ဆိုလို့ရပါတယ်။ လူပြိန်းနားလည်အောင်ပြောရရင် “အပြစ်မဖြစ်အောင် နှလုံးသွင်းခြင်း၊ အကုသိုလ်မဖြစ်အောင် နှလုံးသွင်းခြင်း”လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယောနိသောမနသိကာဖြစ်အောင် နေတာဟာ အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေတာ။ ကုသိုလ်ဖြစ်အောင် နှလုံးသွင်းတာ။ ပိုပြီးအလွယ်ပြောရရင် အကောင်းဘက်က မြင်ကြည့်ပေးတာလို့ ပြောကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကောင်းထားတာပေါ့။
သေချာတာပေါ့။ ဒီယောနိသောမနသိကာရဟာ တိုးတက်လိုသူတွေမှာ လုံးဝရှိရမယ့် တရားပါ။ ယောနိသော မနသိကာရမရှိဘဲ သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် အယောနိသော မနသိကာရရှိရင်တော့ ဘယ်လိုမှ အောင်မြင်တိုးတက်မှု မရနိုင်ပါဘူး။ အပေါင်းအသင်းကောင်းလို့ ပတ်ဝန်းကျင် မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်းကောင်းလို့ အောင်မြင်တိုးတက်မယ် ဆိုရင်လည်း ခဏပဲဖြစ်မှာပါ။ အောင်မြင်မှုအတွက် ပြိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်လည်း ဒီယောနိသော မနသိကာရကို လက်ကိုင်ထားပြီး ပြိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးအောင်မြင်တိုးတက်မှာပါ။ ဒီနေရာမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်း နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ ပြိုင်တယ်ဆိုတာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ သူတစ်ပါးနဲ့ပြိုင်ခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြိုင်ခြင်းပါ။ အဲလိုပြိုင်ရာမှာလည်း သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်နစ်နာစေပြီးမှ အောင်နိုင်မှုရတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ဘဲ ကိုယ်လမ်းကိုယ်ဖြောင့်ဖြောင့်သွားပြီး ရိုးသားစွာပြိုင်ဆိုင်တဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုမျိုးလို့ နှစ်မျိုးနားလည် သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီပြိုင်ဆိုင်မှု နှစ်မျိုးမှာ မရိုးမသား ပြိုင်ဆိုင်မှုကတော့ ဘယ်လိုမှ အောင်မြင်မှု မရနိုင်ပါဘူး။ မရိုးသားတဲ့ စိတ်ရှိတာကိုက အယောနိသော မနသိကာရဆိုတဲ့ နှလုံးသွင်းမမှန်ကန်တာပါ။ ကံကောင်းလို့ အောင်မြင်တယ်ဆိုလည်း ခဏပါ။ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်း ယောနိသောမနသိကာရလေးထားပြီး ရိုးသားစွာပြိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိပ်ပြာသန့်တဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်မှာပါ။ အတိတ်ပါရမီနည်းလို့ ထင်သလောက် မအောင်မြင်တာတောင်မှ ရိုးသားစွားကြိုးစားတဲ့ ၀ီရိယအကျိုးတော့ ခံစားရမှာပါ။ အဲလိုဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ သဘောပေါက်ထားရမှာက ယောနိသောမနသိကာကြောင့်တော့ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို အတားအဆီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပါ။
တကယ်တော့ ပြိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ သူများနဲ့ပြိုင်တာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ ပြိုင်တာက ပိုပြီးအောင်မြင် တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ငါနဲ့ မနက်ဖြန်ငါ မတူရအောင် ဒီနေ့ငါကို မနက်ဖြန်ငါက အနိုင်ရအောင်ပြိုင်သင့်ပါတယ်။ ဒီနေ့ငါဟာ ဒီလောက်ပဲသိတယ်ဆိုရင် မနက်ဖြန်ငါက ဒီနေ့ငါကို အနိုင်ရအောင် ဒီထက်ပိုပြီးသိအောင် ပြိုင်သင့်ပါတယ်။ ဒီနေ့ငါဟာ ကုသိုလ်၊ ပညာ၊ ဥစ္စာ စတာတွေ ဒီလောက်ပဲရလိုက်တယ်ဆိုရင် မနက်ဖြန်ငါက ဒီထက်ပိုပြီးရအောင် ပြိုင်နိုင်ရပါမယ်။ ဒီနေ့ငါရဲ့ ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာ၊ စိတ်အမူအရာ စတာတွေဟာ ဒီလောက်ပဲ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသိမ့်မွေ့နေပေမယ့် မနက်ဖြန်ငါက ဒီထက်ပိုပြီး သိမ်မွေ့နူးညံ့အောင် ပြိုင်ဆိုင်သင့်ပါတယ်။ အဲလိုပြိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင် သေချာပေါက် လောကီလောကုတ္တရာ အကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းပြီး အောင်မြင်မှုရမှာ မလွဲပါဧကန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ လိုရင်းအနှစ်ချုပ် ဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ်ကွယ်….
။ အချိန် 3/15/2008 09:53:00 PM
တပည့်တော် ရိုသေစွာလျှောက်ထားပါသည်။ ၁။ သောတာပန်ဖြစ်သွားရင် ငါးပါးသီလ လုံးဝမြဲသွားပါသလား။ ၂။ သောတာပန် ၇ ဘ၀ယူပုံလဲ သိချင်ပါတယ်ဘုရား။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ကန်တော့ပါတယ်ဘုရား…
A. သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များ ရရှိတော်မူပြီးတဲ့ သောတာပတ္တိမဂ်ဟာ ကိလေသာဆယ်ပါးထဲက ဒိဋ္ဌိ (အယူလွဲမှားမှု)နဲ့ ၀ိစိကိစ္ဆာ (ရတနာသုံးပါး ကံကံ၏အကျိုးတရားများအပေါ် ယုံမှားသံသယရှိမှု) ဆိုတဲ့ ကိလေသာ နှစ်ပါးနဲ့ အပါယ်လားစေနိုင်တဲ့ အကုသိုလ်တရားတို့ကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်သတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အပြင် သောတာပန်အင်္ဂါလေးပါးလို့ ခေါ်တဲ့
၁။ ဗုဒ္ဓေ အဝေစ္စ ပသာဒ သမန္နာဂတာ = ဘုရားရှင်၌ မတုန်မလှုပ်ကြည်ညိုလေးစားခြင်း
၂။ ဓမ္မေ အဝေစ္စ ပသာဒ သမန္နာဂတာ = တရားတော်၌ မတုန်မလှုပ်ကြည်ညိုလေးစားခြင်း
၃။ သံဃေ အဝေစ္စ ပသာဒ သမန္နာဂတာ = သံဃာတော်၌ မတုန်မလှုပ်ကြည်ညိုလေးစားခြင်း
၄။ အရိယကန္တ သီလေဟိ သမန္နာဂတာ = အရိယကန္တသီလတို့ကို စောင့်ထိန်းရာ၌ အသက်သေလျှင် သေပါစေ သီလ၌ ညစ်နွမ်းမှု မရှိစေရအောင် ပြည့်စုံစွာစောင့်ထိန်းခြင်း (မဟာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်) အင်္ဂါလေးပါးမှာ အရိယကန္တသီလ (ဒီနေရာ၌ ငါးပါးသီလကိုဆိုလိုသည်) ကို လုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်းခြင်း ခေါ်တဲ့ အင်္ဂါအရ သောတာပန် ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ငါးပါးသီလလုံးဝ မြဲသွားပါပြီ။ အသက်သာအသေခံမယ် သီလကိုတော့ လုံးဝမချိုးဖောက်တော့ပါ။
သောတာပန် ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ရရှိတဲ့မဂ်ဖိုလ်ဉာဏ် အဆင့်အတန်းကိုလိုက်ကာ သုံးမျိုးသုံးစားကွဲပြားပါတယ်။ အဲဒီသောတာပန် ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးက
၁။ ဧကဗီဇသောတာပန် = ကာမဘုံ၌ တစ်ကြိမ်သာ ပဋိသန္ဓေနေပြီး ရဟန္တာဖြစ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်
၂။ ကောလံကောလသောတာပန် = ကာမဘုံ၌ နှစ်ကြိမ်မှ ခြောက်ကြိမ်အတွင်းသာ အမျိုးကောင်းတစ်မျိုးမှ အမျိုးကောင်းတစ်မျိုးသို့ ပြောင်းရွေ့ ပဋိသန္ဓေနေပြီး ရဟန္တာဖြစ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်
၃။ သတ္တက္ခတ္တုပရမသောတာပန် = ကာမဘုံ၌ ၇ကြိမ်ပဋိသန္ဓေနေပြီး ရဟန္တာဖြစ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ် (မဟာဝဂ္ဂသံယုတ်၊ ပါ။ ၁၈၀) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသုံးမျိုးထဲမှာ ဒကာကိုဇေသိလိုတဲ့ သောတာပန် အမျိုးအစားဟာ နံပါတ်သုံးအမျိုးအစားပါ။ ဒီနေရာမှာ ကာမဘုံလို့ ဆိုပေမယ့် လူ့ဘုံနတ်ဘုံလို့ခေါ်တဲ့ ကာမသုဂတိဘုံကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဗြဟ္မာ့ဘုံကိုလည်း နတ်ဘုံထဲမှာ ထည့်သွင်းယူပါတယ်။ ကာမဘုံမှာ ၇ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့သာ တစ်ဘ၀မှ တစ်ဘ၀ကူးပြောင်း ပဋိသန္ဓေနေတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဖြစ်ရာဘုံဘ၀မှာလည်း သောတာပန်တို့ ကျင့်ရမယ့် ထိန်းရမယ့်အင်္ဂါရပ်တွေကို မပျက်အောင်ထိန်းသိမ်း၊ တရားဓမ္မအားထုတ်ပြီး နောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ် သွားကာ နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပါတယ်။
မှန်ပါတယ်။ ဒကာပြောသလို သောတာပန် ဖြစ်မဖြစ် ငါးပါးသီလလုံခြုံတာနဲ့ စစ်လို့မရပါဘူး။ ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်း ငါးပါးသီလလုံခြုံတဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။ ဒီနေရာသတိပြုရမှာက ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ သဒ္ဓါတရား မခိုင်မြဲသေးတဲ့အတွက် ငါးပါးသီလကို အသက်နဲ့လဲပြီး လုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်းဖို့က မလွယ်ပါဘူး။ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ သဒ္ဓါတရားခိုင်မြဲသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အသက်သာအသေခံမယ် သီလတော့ အပျက်မခံပါဘူး။ ဒီအချက်ကို ကြည့်ရင်လည်း သောတာပန်ဖြစ်မဖြစ် သိနိုင်ပါတယ်။ နောက်မဂ်စစ်မစစ် ဖိုလ်နဲ့စစ်ဆိုတဲ့ စကားလေး။ အဲဒါက ဘုန်းဘုန်းတို့ စာပေမှာ ဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ မဂ်၊ ဖိုလ်၊ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေ။ မဂ်ပေါက်ဖိုလ်ဝင် နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့။ မဂ်ရပြီဆိုတာနဲ့ ဖိုလ်လည်း တစ်ခါတည်းနောက်က ရလာပါတယ်။ မဂ်ဖိုလ်ရပြီဆိုရင် နိဗ္ဗာန်လည်း ရပြီပေါ့။ မှန်ပါတယ်။ တရားအားထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အားထုတ်စဉ်ကာလမှာ မဂ်အစစ်ကို မရခင် မဂ်အတုလို့ခေါ်တဲ့ သြဘာသ၊ ပီတိ ပဿဒ္ဓိ (အရောင်အလင်း၊ ငြိမ်းချမ်းမှုပီတိ) စတဲ့ အရသာတွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီဟာတွေကို ကျော်လွန်သွားအောင် တရားအားထုတ်နိုင်မှသာ စစ်မှန်တဲ့သောတာပတ္တိမဂ်ကို ရနိုင်ပါတယ်။ အချို့ယောဂီများဟာ မဂ်အတုလို့ခေါ်တဲ့ အရောင်အလင်းပီတိစတာတွေကို ခံစားပြီး မိမိကိုယ်ကိုသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ ထင်သွားတတ်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပြောလိုတာက စစ်မှန်တဲ့ သောတာပတ္တိမဂ်ကို ရပြီဆိုရင် ဖိုလ်နဲ့စစ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဖိုလ်လည်း နောက်ကလိုက်ပြီး ရသွားပါပြီ။
ဒကာတော်မေးလို့သာ ဖြေပေးရတာ။ တကယ်တော့ တရားတကယ်အားထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကိုယ်ဘယ်အဆင့် ရောက်တယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ့ တရားအားထုတ်ဖြစ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ်ရရှိတဲ့ ဉာဏ်တွေကိုလည်း သိလာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်အားမထုတ်ဖြစ်ဘဲနဲ့တော့ သူတစ်ပါးသောတာပန် ဖြစ်မဖြစ်၊ ဘယ်ဉာဏ်ကို ရမရဆိုတာ သေချာပေါက်မပြောနိုင်ပါဘူး။ သိလည်း မသိနိုင်ပါဘူး။ သူတပါးကို သိဖို့ထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိဖို့ပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိဖို့အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အားထုတ်ကြည့်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အားထုတ်ကြည့်ဖို့လည်း အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် ဒကာတော်ရဲ့ အမေးလေးတွေအတွက် ကျေနပ်မှုရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်များ သိချင်တာရှိရင်လည်း အချိန်မရွေး အကန့်အသတ်မရှိမေးနိုင်ပါတယ်…
မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သူငယ်ချင်းများကို အရက်ဖိုးအလှူပြုတာ ကုသိုလ်ရ၊ မရ...
။ အချိန် 3/09/2008 12:44:00 PM
မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သူငယ်ချင်းများကို အရက်ဝယ်တိုက်ပြီး အရက်ဖိုးအလှူပြုပေးတာ ကုသိုလ်ရပါသလားဘုရား။ တပည့်တော်ကတော့ မသောက်ပါဘုရား။ သူငယ်ချင်းများရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ သူတို့ဖြစ်ချင်တာကို လုပ်ပေးတာပါဘုရား။ အဲလိုလှူတာ အကျိုးရှိမရှိ။ သူတပါးလိုအပ်တာကို ဖြည့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ ယူလို့ရမရ သိချင်ပါတယ်ဘုရား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
A. သူတပါးလိုအပ်တာကို ဖြည့်ပေးတဲ့နေရာမှာ ကောင်းတဲ့အရာ ကောင်းတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ပေးမှသာ တကယ့်ကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ ယူဆလို့ရပြီး မိတ်ဆွေအစစ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ အပါယသဟာယ မိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ မကောင်းတဲ့အရာတွေမှာ အပေါင်းအဖော်ဖြစ်တာ လိုက်လျောတာ ဖြည့်ဆည်းပေးတာဟာ မကောင်းမှုကို အားပေးရာရောက်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေအတု လက္ခဏာထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
အရက်ဝယ်တိုက်ပြီး အရက်ဖိုး အလှူပြုပေးတာ ကုသိုလ်လုံးဝမရတဲ့အပြင် အကျိုးလည်းမရှိပါ။ အရက်မဟုတ်ဘဲ တခြားအစားအသောက် အလှူမျိုးဆိုရင်တော့ ကုသိုလ်ရပါတယ်။ အရက်ကတော့ မလှူကောင်းတဲ့အလှူ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အပါယ်လားစေနိုင်တဲ့ အလှူထဲမှာ ပါလို့ပါ။ ဘုန်းဘုန်းတို့ ပရိဝါပါဠိတော်မှာ မလှူကောင်းတဲ့ အလှူငါးမျိုးကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီငါးမျိုးက
(၂) သမဇ္ဖဒါန = ဇာတ်၊ ရုပ်သေး၊ အငြိမ့်စတဲ့ အဆိုအတီးကချေသည် သဘင်အလှူ
(၃) ဣတ္ထိဒါန = ကာမအမှုအတွက် အလိုဖြည့်စေရန် မိန်းမအလှူ
ဒါကြောင့် အထက်ပါအလှူများဟာ ဘယ်လောက်ပဲ အကုန်ကျခံ လှူဒါန်းပေးကမ်းပေမယ့် အကျိုးမရှိ၊ ကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့ အလှူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် မွေးနေ့မှာ အရက်ဖိုးလှူပြီး ဧည့်ခံကျွေးမွေးတာဟာ ကုသိုလ်မဖြစ်ပါဟု ဖြေကြားလိုက်ပါတယ်။ အရက်မှ မဟုတ်ပါ ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ အလှူအားလုံးကို အလှူပြုတဲ့အခါ မလှူဖြစ်အောင် ကျိုးစားပြီး အပြစ်ကင်းတဲ့ အလှူဖြစ်အောင် တစ်ခြားအရာတွေကိုသာ လှူကြပါလို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
။ အချိန် 3/06/2008 03:44:00 PM
ဘုန်းဘုန်းတို့ တရားပွဲတစ်ခုမှာ တရားပွဲမစခင် ဒကာလေးများနဲ့ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်းပြောကြရင်း ဒကလေးတစ်ယောက်က သူရဲ့အတွေ့အကြုံအကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ သူက ပရဟိတလုပ်ငန်းလေးတွေကို ကြိုးစားလုပ်ပေးနေတဲ့ ဒကာလေးပါ။ ပရဟိတလုပ်တယ်ဆိုတော့ သိတဲ့ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းအပေါင်း အသင်းများဆီက တတ်နိုင်သမျှ အလှူငွေလေးတွေ အလှူခံ စုဆောင်းပေးရတာပေါ့။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်က လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာ တစ်ဆင့်ပြန်လှူပေးပေါ့။ ဒီအလုပ်လေးတွေ လုပ်ပေးတာပါ။ အဲလိုလုပ်ရင်း သူနဲ့သိတဲ့ သူတစ်ယောက်အကြောင်း စကားစပ်ပြောဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အသိက အဲလိုပရဟိတ အလုပ်လေးတွေ ကြိုးစားလုပ်ပေးနေတဲ့ သူတော်တော်များနဲ့ ခင်မင်ရင်နှီးတဲ့အတွက် တစ်လတစ်လ လခထုတ်ရင် ဟိုတစ်သောင်း ဒီတစ်သောင်းနဲ့ လှူဖြစ်တဲ့အကြောင်း အခုအချိန် သူလည်းအလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပုံမှန်အလှူခံနေကျ သူငယ်ချင်းများကို မလှူနိုင်တဲ့အတွက် သူတို့တွေနဲ့ မတွေ့အောင် ရှောင်နေရတဲ့အကြောင်း ပြောပြလျှောက်ထားပါတယ်။ ဒကာလေးကတော့ သူ့အတွေ့အကြုံလေးကို ပြန်လည်ပြောပြတယ်ဆိုပေမယ့် ဘုန်းဘုန်းခေါင်းထဲမှာတော့ အတွေးပေါင်းစုံရောက်လာပါတယ်။
အတွေးတစ်ခုက “တောင်းပါများရင် အမုန်းခံရတတ်တယ်”ဆိုတဲ့ ကောက်ချက်ချ အတွေးလေးပါ။ အလှူခံတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ ဘာသာရေးအသုံးနဲ့ သုံးတဲ့သဘောပါ။ အမှန်တော့ တောင်းတာပါပဲ။ ကိုယ့်အတွက်တောင်းတာနဲ့ အများအတွက် တောင်းတာကွာတာပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲ အလှူခံခံ အလှူခံပါများရင် နောက်ဆုံး ကိုယ့်မြင်ရင်တောင် အဝေးကနေ ရှောင်သွားတတ်တဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လုပ် အရိပ်အကဲ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး အစွန်းရောက်မသွားအောင် လုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘုရားစကားနဲ့ပြောရင် မဇ္ဈိမပဋိပဒါဖြစ်တဲ့ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ပေါ့။ ဘာပဲလုပ်လုပ် တစ်ဘက်ကိုအားများသွားရင် တစ်ဘက်က ယုတ်လျော့သွားတတ်ပါတယ်။ အဲလိုဆို အစွန်းရောက်သွားပြီပေါ့။ အတ္တဟိတပဲလုပ်လုပ် ပရဟိတပဲလုပ်လုပ် အစွန်းမရောက်အောင် လုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အစွန်းမရောက်ဘဲ မယုတ်မလွန် လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဘာပြဿနာမှ ပေါ်နိုင်စရာ မရှိသလို ကိုယ်အလုပ်လည်း အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီသဘောပါပဲ အလှူခံတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကာလဒေသ အခြေအနေ အချိန်အခါ မသိဘဲ လုပ်မိရင်တော့ တောင်းပါများရင် အမုန်းရတတ်ပါတယ်။ တောင်းခြင်းကြောင့် အမုန်းခံရတတ်တယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ သတ္တ၀ါတို့ရဲ့ သဘောကိုက မလုပ်နဲ့ဆိုရင် လုပ်ချင်တတ်ကြသလို လုပ်ပါလို့ပြောရင် မလုပ်ချင် တတ်ကြတဲ့ သဘောကိုး။ လှူပါလို့ ပြောရင်လှူချင်တဲ့ စိတ်ရှိချင်မှ ရှိမှာပါ။ တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း သူ့အလိုလို သဒ္ဓါပေါက်ပြီး လှူဒါန်းလာတာလည်း ရှိပါတယ်။ အဲလိုသဒ္ဓါပေါက်လို့ လှူဒါန်းမှုက ကိုယ်သတ်မှတ်ပြီး အလှူခံတာထက် များရင်လည်း များတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တောင်းတဲ့အခါ အလှူခံတဲ့အခါ အမုန်းမရအောင် အစွန်းမရောက်ဖို့ အခြေအနေ အရိပ်အကဲ သိဖို့လိုပါတယ်။
တောင်းပါများရင် အမုန်းရတတ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးနဲ့စပ်ပြီး ဗုဒ္ဓစာပေထဲက ဇာတ်တော်လေးတစ်ခုကို သတိရမိပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်တော်လေးကို ဒီနေရာမှာ တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်တော်ရဲ့အမည်က မဏိကဏ္ဌဇာတ်တော်ပါ။
ဗာရဏသီပြည်မှာ ဗြဟ္မဒတ်မင်းကြီး ထီးနန်းအုပ်ချုပ်ချိန်က ဘုန်းဘုန်းတို့ ဘုရားလောင်းဟာ ချမ်းသာတဲ့ပုဏ္ဏားမျိုးမှာ မွေးဖွားပါတယ်။ ဘုရားလောင်းပုဏ္ဏားမှာ ညီငယ်တစ်ယောက်လည်း ရှိပါတယ်။ မိဘနှစ်ပါး ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်လုံး ရသေ့များဝတ်ပြီး နောင်တော်ရသေ့က ဂင်္ဂါမြစ်အထက်ပိုင်း ကျောင်းသင်္ခမ်းမှာနေပြီး ညီတော်ရသေ့က ဂင်္ဂါမြစ်အောင်ပိုင်း ကျောင်းသင်္ခမ်းမှာ ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်ပြီး နေကြပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ မဏိကဏ္ဌဆိုတဲ့ နဂါးမင်းဟာ လူငယ်အသွင် ဖန်ဆင်းပြီး ဂင်္ဂါမြစ်ကမ်းနားတစ်လျှောက် လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း ညီတော်ရသေ့ရဲ့ ကျောင်းသင်္ခမ်းကိုရောက် စကားပြောဆိုကြကာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရသွားပါတယ်။ နဂါးမင်းဟာ ပြန်ခါနီးဆိုရင် ရသေ့အပေါ် ချစ်ခင်ကျင်နာမှုကို ပြတဲ့သဘောနဲ့ လူငယ်အသွင်ဖျောက်ပြီး နဂါးအသွင်းဖြင့် ရသေ့တစ်ကိုယ်လုံးကို ရစ်ပတ်ပြီး ခေါင်းပေါ်မှာ ပါးပြင်းမိုးကာ ခဏနေပြီးမှ ပြန်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပဲ နေ့စဉ်ဖြစ်နေတဲ့အခါ ညီတော်ရသေ့ဟာ ကြောက်စိတ်ဝင်ပြီး စားမ၀င်အိပ်မပျော် တရားလည်းအားထုတ်လို့မရဘဲ ပိန်ချုံးလာပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို နောင်တော်ရသေ့နဲ့တွေ့လို့ ပြောဆိုတဲ့အခါ နောင်တော်က နောင်အခါ နဂါးမင်းလာရင် နဂါးမင်းဝတ်ဆင်လာတဲ့ ပတ္တမြားကိုတောင်းဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ ညီတော်ရသေ့လည်း နောင်တော်အကြံပြုတဲ့အတိုင်း နဂါးမင်းလာတဲ့အခါ ပတ္တမြားကို တောင်းပါတယ်။ နဂါးမင်းလည်း အဲဒီနေ့က စပြီးနောက်ပိုင်း ထပ်မလာတော့ပါဘူး။ နဂါးမင်းမလာတော့တဲ့အတွက် ညီတော်ရသေ့လည်း တရားကောင်းကောင်း အားထုတ်လို့ ရသွားပါတယ်။
ဇာတ်တော်ရဲ့ အကြောင်းအရာက ဒါပါပဲ။ ဒီဇာတ်တော်မှာ နောင်တော်ရသေ့ဟာ ဘုန်းဘုန်းတို့ ဘုရားလောင်းဖြစ်ပြီး ညီတော်ရသေ့ကတော့ အရှင်အာနန္ဒာလောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်တော်မှာ အဓိကပြောချင်တာက တောင်းမှုပါ။ တောင်းခြင်းကြောင့် အမုန်းခံတတ်တာကို ပြောချင်တာပါ။ တောင်းပါများလျှင် အမုန်းရတတ်တာကို ပြောချင်တာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီဇာတ်တော်လာ သာဓကကို ယူပြီး အတ္တဟိတ၊ ပရဟိတဆောင်ရွက်လိုသူများ အထူးသတိပြုဖို့ အလှူခံခြင်းကြောင့် အမုန်းခံရမှု မဖြစ်အောင် သတိပြုကြဖို့၊ ဘာပဲလုပ်လုပ် အစွန်းမရောက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်..
။ အချိန် 3/02/2008 01:21:00 PM
.အနုဿတိဟူသည် အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် အောက်မေ့အပ်သော ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုဆိုပါတယ်။ အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်၌ အနုဿတိ ဆယ်ပါးရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းဆယ်ပါးမှာ-
(၁) ဗုဒ္ဓါနုဿတိ = ဘုရားရှင်၏ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကို အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် မပြတ်အောက်မေ့ခြင်း၊
(၂) ဓမ္မာနုဿတိ = တရားတော်၏ဂုဏ်တော်တို့ကို အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် မပြတ်အောက်မေ့ခြင်း၊
(၃) သံဃာနုဿတိ = သံဃာတော်တို့၏ဂုဏ်တော်တို့ကို အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် မပြတ်အောက်မေ့ခြင်း၊
(၄) သီလာနုဿတိ = မိမိစောင့်ထိန်းသော သီလဂုဏ်ကို အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် မပြတ်အောက်မေ့ခြင်း၊
(၅) စာဂါနုဿတိ = လှူဒါန်းခြင်း ဒါနဂုဏ်ကို အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် မပြတ်အောက်မေ့ခြင်း၊
(၆) ဒေ၀တာနုဿတိ = နတ်တို့ကို သက်သေထား၍ နတ်အဖြစ်သို့ရောက်အောင် ပို့ဆောင်နိုင်သော သဒ္ဓါစသည့် မိမိ၏ကုသိုလ်တရားတို့ကို အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် မပြတ်အောက်မေ့ခြင်း၊
(၇) ဥပသမာနုဿတိ = ကိလေသာမှကင်းငြိမ်းခြင်း ဥပသမာဂုဏ်ကို အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် မပြတ်အောက်မေ့ခြင်း၊
(၈) မရဏာနုဿတိ = သေခြင်းတရားကို အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် မပြတ်အောက်မေ့ခြင်း၊
(၉) ကာယဂတာသတိ = ဆံပင်စသည့် ၃၂ကောဋ္ဌာသကို အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် မပြတ်အောက်မေ့ခြင်း၊
(၁၀) အာနာပါဏုဿတိ = ထွက်သက်ဝင်သက်ကို အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် မပြတ်အောက်မေ့ခြင်း၊
။ အချိန် 3/02/2008 01:14:00 PM
ဘုရားကိုးဆူပူဇော်ပွဲအကြောင်းသိချင်ပါတယ်ဘုရား။ ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာ ဘုရားကိုးဆူအကြောင်း ဖော်ပြထားတာ ရှိပါသလားဘုရား။ ရှိရင်သိချင်ပါတယ်ဘုရား။
A.ဘုရားကိုးဆူပူဇော်ပွဲဟာ ဓမ္မပဒ အဋ္ဌကထာ၊ ပထမအုပ် ၄၂၃ အာယုဝဍ္ဎနကုမာရ ၀တ္ထုမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာ ဟန်ရှိကြောင်း ပညာရှိများယူဆကြပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်လုပ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်း အတိအကျဖော်ပြထားတာတော့ ပိဋကတ်စာပေမှာ မရှိပါဘူး။ ယနေ့ခေတ် ဘုရားကိုးဆူပူဇော်ပွဲမှာ လောကီကြီးပွားချမ်းသာရေးကို မျှော်ကိုးပြီး ပြုလုပ်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘုရားအမှူးရှိတဲ့ ရဟန္တာရှစ်ပါးနှင့်တကွ ဂြိုလ်ကြီးကိုးလုံးတို့ကို ပူဇော်ပသတဲ့ လောကကြီးပွားရေးဦးစားပေးတဲ့ ပူဇော်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ထေရ၀ါဒစံနဲ့ မကိုက်ညီပေမယ့် ဖြေသာတာက ဘုရားအမှူးရှိတဲ့ ရဟန္တာများကို ပူဇော်တာဖြစ်တဲ့အတွက် သာသနာ့အပြင်က ကိုကြီးကျော် ဦးရှင်ကြီးစတဲ့ နတ်တွေကို ပူဇော်ပသတာတွေနဲ့စာရင် တော်သေးတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထားတတ်ဖို့နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ ပူဇော်တဲ့အခါ ဘုရားရှင်၏ဂုဏ်တော်များနဲ့ ရဟန္တာမထေရ်များရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေအထိ အာရုံပြုပြီး ပူဇော်ပသနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးအကျိုးများနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘုရားကိုးဆူပူဇော်တဲ့ပုံစံနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ဘုရားအစရှိတဲ့ ရဟန္တာမထေရ်များရဲ့ဂုဏ်တွေကို အာရုံပြုပြီး နေ့စဉ်ပူဇော်မှုက ပိုပြီးကုသိုလ်အကျိုးကြီးပါတယ်။ ဘုရားကိုးဆူပူဇော်မှုက လာတ်လာဘပေါများရေး၊ စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ရေး၊ ရာထူးအဆင့်အတန်းတိုးတက်ရေး စတဲ့မျှော်လင့်မှုများနဲ့ လုပ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကုန်ကျမှုများသလောက် အကျိုးဖြစ်မှုက နည်းနိုင်ပါတယ်။ အထိုက်အလျှောက်ကုသိုလ် ရနိုင်ပေမယ့် ရည်ရွယ် ချက်က လွဲနေပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က တကယ့်အစစ်အမှန် ရတနာသုံးပါးကို လောကီကြောင်း လောကီအယူအဆတွေနဲ့ ရောယှက်လုပ်ဆောင်ကြတာကတော့ သိပ်မကောင်းပါဘူး။ ဘာသာရေးဟာ ဘာသာရေးသီးသန့် လောကီရေးက လောကီရေးသီးသန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ရတနာသုံးပါး ကိုးကွယ်ပူဇော်ဆည်းကပ်ရာမှာ ဘယဆိုတဲ့အကြောက်တရား၊ ကုလဆိုတဲ့အမျိုးအနွယ်၊ လာဘဆိုတဲ့ လာဘ်တွေကို ရှောင်ရှားပြီး ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်စေတနာ သဒ္ဓါတရားအစစ်အမှန်နဲ့ ဂုဏ်တော်ကို အာရုံပြုပြီး နှလုံးသားမှာတည်အောင် ကိုးကွယ်ပူဇော်နိုင်မယ်ဆိုရင် အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ပူဇော်နည်းပါ။ အဲလိုဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် ဘုရားကိုးဆူပူဇော်မူနဲ့ ပတ်သက်လို့ အနည်းငယ်သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ ယနေ့ခေတ်ပြုလုပ်နေကြတဲ့ ဘုရားကိုးဆူနဲ့ ထားရှိသည့်နေရာအရပ်ဒေသတို့ကို ဗဟုသုတအဖြစ် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) ဘုရားသခင် = အလယ်အရပ်၌ ဗောဓိပင်ကို ရည်စူး၍ထားသည်။
(၂) ရှင်သာရိပုတ္တရာ = ဗုဒ္ဓဟူသား၊ တောင်အရပ် လက်ျာဘက်ကနေသည်။
(၃) ရှင်မောဂ္ဂလာန် = သောကြာသား၊ မြောက်အရပ်၊ လက်ဝဲဘက်ကနေသည်။
(၄) ရှင်ဥပါလိ = စနေသား၊ အနောက်တောင်အရပ်ကနေသည်။
(၅) ရှင်ရာဟုလာ = တနင်္ဂနွေသား၊ အရှေ့မြောက်အရပ်ကနေသည်။
(၆) ရှင်အာနန္ဒာ = ကြာသပတေးသား၊ အနောက်မျက်နှာအရပ်ကနေသည်။
(၇) ရှင်ကောဏ္ဍည = တနင်္လာသား၊ အရှေ့အရပ်ကနေသည်။
(၈) ရှင်ရေ၀တ = အင်္ဂါသား၊ အရှေ့တောင်ထောင့်အရပ်ကနေသည်။
(၉) ရှင်ဂ၀မ္ပတိ = ရာဟုသား၊ အနောက်မြောက်ထောင့်အရပ်ကနေသည်။
။ အချိန် 3/02/2008 01:07:00 PM
Q.အနာမျိုး (၉၆)ပါးကို သိချင်ပါတယ်ဘုရား။ ကျေးဇူးပြု၍ဖြေကြားပေးပါဘုရား။
(မာလာ၊ ခေတ္တ U.S.A)
A. အနာမျိုး (၉၆)ပါးကတော့ (၁) စက္ခုရောဂေါ-မျက်စိ၌ဖြစ်သောအနာ၊ (၂) သောတရောဂေါ- နားတွင်း၌ဖြစ်သော အနာ၊ (၃) ဃာနရောဂေါ- နှာခေါင်း၌ ဖြစ်သောအနာ၊ (၄) ဇိဝှါရောဂေါ- လျှာ၌ဖြစ်သောအနာ၊ (၅) ကာယရောဂေါ- ကိုယ်၌ဖြစ်သောအနာ၊ (၆) သီသရောဂေါ- ဦးခေါင်း၌ဖြစ်သောအနာ၊ (၇) ကဏ္ဏရောဂေါ- နားရွက်၌ဖြစ်သောအနာ၊ (၈) မုခရောဂေါ- ခံတွင်း၌ဖြစ်သောအနာ၊ (၉) ဒန္တရောဂေါ- သွား၌ဖြစ်သောအနာ၊ (၁၀) ကာသော- ချောင်းဆိုးနာ၊ (၁၁) သာသော- ကြို့ထိုးနာ၊ (၁၂) ပိနာသော- နှာခေါင်းအ၀၌ဖြစ်သောအနာ၊ (၁၃) ဍာဟော- တစ်ကိုယ်လုံးပူစေတတ်သောအနာ၊ (၁၄) ဇရော- ဖျားသောအနာ၊ (၁၅) ကုစ္ဆိရောဂေါ- ၀မ်း၌ဖြစ်သောအနာ၊ (၁၆) မုစ္ဆာ- တွေဝေမေ့မောစေတတ်သောအနာ၊ (၁၇) ပက္ခန္ဒိကာ- သွေးကိုသွန်အန်တတ်သော ၀မ်းလေနာ၊ (၁၈) သူလာ- ထိုးကျင်စေတတ်သော ၀မ်းလေနာ၊ (၁၉) ၀ိသုစိကာ- ကြီးစွာဝမ်းလျှောကျသောအနာ၊ ကာလနာ၊ (၂၀) ကုဋ္ဌ- နူနာ၊ (၂၁) ကဏ္ဍော- အိုင်းနာမြင်းဖုစသောအနာ၊ (၂၂) ကိလာသော- ညှင်းတင်းထိပ်နာ၊ (၂၃) သောသော- အဆုတ်နာ၊ ပန်းနာ၊ (၂၄) အပ္ပမာရော- ၀က်ရူး၊ ကြက်ရူး၊ နတ်ဘီလူးဖမ်းစားသောအနာမျိုး၊၊ (၂၅) ဒဒ္ဒူ- ပွေးနာ၊ (၂၆) ကစ္ဆု- ၀ဲကြီးဝဲစိုနာ၊ (၂၇) ကဏ္ဍု- ၀ဲငယ်ဝဲခြောက်နာ၊ (၂၈) နခသာ- ခြေသည်းလက်သည်းတို့ဖြင့် ခြစ်မိရာအရပ်၌ ဖြစ်ပေါ်သောအနာ၊ (၂၉) ၀တ၀စ္ဆိကာ- ခြေဖ၀ါး၊ လက်ဖ၀ါးပြင်တို့၌ အမျှင်အမျှင်ကွဲအက်သောအနာ၊ (၃၀) လောဟိဝိတ္တံ- သွေးသည်းခြေနာ၊ သို့မဟုတ် နီသောသည်းခြေနာ၊ (၃၁) မဓုမေဟော- ဆီးချိုနာ၊ (၃၂) အံသာ- အရိယိုနာ၊ (၃၃) ၀ိဠကာ- ထွတ်မြင်းနာ၊ ဖောယောင်နာ၊ (၃၄) ဘဂန္ဒလာ- ဂယင်ဂျီနာ
ပါဠိတော်စကားအရ အထက်ပါအနာ (၃၄) မျိုးတို့တွင် အမှတ် (၂၄)နှင့် (၂၈)အနာနှစ်မျိုးတို့မှာ သည်းခြေ၊ သလိပ်၊ လေတို့ကြောင့် ဖြစ်လေ့မရှိဘဲ (မဖြစ်နိုင်ဘဲ) ကျန်အနာ (၃၂) မျိုးတို့သာလျင် သည်းခြေ၊ သလိပ်၊ လေတို့ကြောင့် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသဖြင့် သည်းခြေကြောင့်ဖြစ်သော အနာ (၃၂) မျိုး၊ သလိပ်ကြောင့်ဖြစ်သော အနာ (၃၂) မျိုး၊ လေကြောင့်ဖြစ်သော အနာ (၃၂)မျိုးအားဖြင့် ပေါင်း အနာမျိုး (၉၆)ပါးဖြစ်လာရပါတယ်။
ဒီ (၉၆)ပါးကိုပင် အနာမျိုးကိုးဆယ့်ခြောက်ပါးဟူ၍ ခေါ်ဆိုပြောဆိုကြပါတယ်။ ဆုတောင်းတဲ့အခါတွင်းလည်း အနာမျိုးကိုးဆယ့်ခြောက်းပါးမှ ကင်းဝေးရပါ၏လို့ ဆုတောင်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ (အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ၁၀၊ ၃၄၃)
။ အချိန် 3/02/2008 01:01:00 PM
.ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် ငါးပါးသီလဟာ ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို့ လုံခြုံရမယ့် ကိုယ့်ကျင့်သီလဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီလဟာ ငါးပါးတည်းဆိုပေမယ့် လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ပိုပြီးခက်ခဲတာက သီလသိက္ခာပုဒ်တစ်ခု ကျူးလွန်မိတာ ပျက်ဆီးသွားတာကို မသိတာက ပိုဆိုးပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်း အင်္ဂါတွေနဲ့ ညီညွတ်မှ ကံမြောက်တယ် သီလပျက်တယ်ဆိုတာ မသိတဲ့အတွက် သီလစောင့်ထိန်းရာမှာ သံသယဖြစ်မှုတွေ တိုးပွားပြီး စိတ်ကိုလေးလံစေပါတယ်။ တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓစာပေများအရ ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းညီညွတ်မှ အကျိုးဖြစ်တာပါ။ အကြောင်းခိုင်လုံမှ အကျိုးပေးမှုဖြစ်တာပါ။ ဒီသဘောအတိုင်းပဲ သီလစောင့်ထိန်းရာမှာလည်း အကြောင်းအင်္ဂါရပ်တွေပြည့်စုံမှ ကံမြောက်တဲ့အထိ ကျူးလွန်ရာရောက်တာပါ။ အဲဒီအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ညီညွတ်မှသာ သီလပျက်တာပါ။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အနေဖြင့် သိသင့်တဲ့ ငါးပါးသီလရဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
.ပါဏာတိပါတ (သတ်မှု) ကံမြောက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါ (၅)ပါး
၁။ ပါဏ = သက်ရှိသတ္တ၀ါဖြစ်ခြင်း
၂။ ပါဏသညိတ = သက်ရှိသတ္တ၀ါဟု မှတ်သိခြင်း
၃။ ဃာတစိတ္တ = သတ်လိုတဲ့စိတ်ရှိခြင်း
၄။ ဥပက္ကမ = လုံ့လပြုခြင်း
၅။ မရဏ = ထိုလုံ့လကြောင့် သေခြင်း
အဒိန္နဒါန (ခိုးမှု) ကံမြောက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါ (၅)ပါး
၁။ ပရသန္တက = သူတစ်ပါးဥစ္စာဖြစ်ခြင်း
၂။ တထာသညာ = သူတစ်ပါးဥစ္စာဟု မှတ်သိခြင်း
၃။ ထေယျစိတ္တ = ခိုးလိုသောစိတ်ရှိခြင်း
၅။ တေနဟာရ = ထိုလုံ့လဖြင့် ခိုးယူခြင်း
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ (ကာမကိစ္စ) ကံမြောက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါ (၄)ပါး
၁။ အဂမနိယ၀တ္ထု (အုပ်ထိန်းခြင်း) (၂၀) တို့တွင်ပါဝင်ခြင်း
(၁။ အမိအုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊ ၂။ အဘအုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊ ၃။ မိဘနှစ်ပါးအုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊ ၄။ မောင်ကြီးမောင်ငယ် အုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊ ၅။ အစ်မကြီးအစ်မငယ် အုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊ ၆။ ဆွေမျိုးအုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊ ၇။ အနွယ်တူအုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊ ၈။ အတူနေသီတင်းသုံးဖော် အုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊ ၉။ လက်ထပ်ပြီးသူလင်ယောက်ျား အုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊ ၁၀။ မင်းတို့ကောက်ယူရန် သတ်မှတ်ထားပြီးသောမိန်းမ၊ ၁၁။ ဥစ္စာဖြင့်ဝယ်ယူလျက် မယားအဖြစ်ထားသောမိန်းမ၊ ၁၂။ သဘောတူအလိုတူ၍ ညားနေသောမိန်းမ၊ ၁၃။ စည်းစိမ်ပေး၍ ပေါင်းဖော်သောမိန်းမ ၁၄။ ပုဆိုးတန်းတင်ပြု၍ နေသောမိန်းမ၊ ၁၅။ ခွက်၌လက်ဆုံချ၍ မိဘနှစ်ပါး ထိန်းမြားပေးသောမိန်းမ၊ ၁၆။ ခေါင်းခုကိုချ၍ လင်မယားအဖြစ် နေသောမိန်းမ၊ ၁၇။ ကျွန်လည်းဖြစ် မယားလည်းဖြစ်သောမိန်းမ၊ ၁၈။ အမှုလုပ်လည်းဖြစ် မယားလည်းဖြစ်သောမိန်းမ၊ ၁၉။ စစ်မြေပြင်မှ ဆောင်ယူခဲ့သောမိန်းမ၊ ၂၀။ ခဏမျှပေါင်းဖော်ရန် ငှါးရမ်းထားသောမိန်းမ (ပါရာဇိကဏ်ပါဠိတော်၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာ) )
၃။ ရနိုင်သောနည်းဖြင့် လုံ့လပြုခြင်း
၄။ ပြုကျင့်ခြင်းကိုလည်း သာယာခြင်း
မုသာဝါဒ (လိမ်ညာမှု) ကံမြောက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါ (၄)ပါး
၁။ အတထ = မမှန်သောအကြောင်းအရာဖြစ်ခြင်း
၂။ ၀ိသံဝါဒစိတ္တ = မှားယွင်းစေလိုသောစိတ်ရှိခြင်း
၃။ တဇ္ဇ၀ါယမ = ထိုစိတ်ဖြင့်လုံ့လပြုခြင်း
၄။ တဒတ္ထဇာနန = မိမိလိမ်ညာပြောဆိုနေသည်ကိုသိခြင်း
သုရာမေရယ (မူးယစ်သေစာသောက်မှု) ကံမြောက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါ (၄)ပါး
၁။ မဇ္ဇဘာဝ = သေအရက်ကဇော်ဖြစ်ခြင်း
၂။ ပါတုကမျစိတ္တ = သောက်လိုသောစိတ်ရှိခြင်း
၃။ ၀ါယမ = သောက်ဖြစ်အောင် လုံ့လပြုခြင်း
၄။ အဇ္စျောဟရဏ = သောက်မျိုချခြင်း
။ အချိန် 3/02/2008 01:00:00 PM
။ အချိန် 3/02/2008 12:56:00 PM
ဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒိုက်ဦး မြို့နယ်၊ အုတ်ဝင်းကျေးရွာ ခမည်းတော်ဦးတင်မောင်၊ မယ်တော် ဒေါ်ခင်ထွေးတို့မှ ၁၃၃၆ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း (၄)ရက်၊ (၁၅၊ ၁၊ ၁၉၇၅) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်း (၇)ယောက်အနက် တတိယမြောက် သားရတနာဖြစ်သည်။
၁၃၄၈ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း (၃)ရက်၊ စနေနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ မြို့မကျောင်းလမ်း၊ အိမ်တော်ရာကျောင်းတိုက်၊ သီရိဇေယျုံကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသီလာစာရကို ဥပဇ္ဈာယ် ပြု၍ မိဘနှစ်ပါးတို့၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟကို ခံယူကာ ရှင်သာမဏေ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဘွဲ့တော် ရှင်ဝိစိတ္တဖြစ်သည်။
၁၃၅၆ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၃)ရက် (၅၊ ၁၁၊ ၁၉၉၄)၊ စနေနေ့တွင် ခရမ်းမြို့၊ ပါဠိတက္ကသိုလ် ကိုင်းကုန်းကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကေလာသ (အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ) မထေရ်ကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ခရမ်းမြို့၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးလမ်းနေ ဦးဖူးညို + ဒေါ်ခင်မြိုင် မိသားစုတို့၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟကို ခံယူကာ မြင့်မြတ်သော ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသည်။
ပရိယတ်၊ ပဋိပတ်နှင့် လောကီပညာရပ်များ လေ့လာသင်ယူခြင်း
သာသနာ့ဘောင်သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် ဆရာတော်သည် ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ အုတ်ဝင်းကျေးရွာ၊ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တနန္ဒဝံသ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ အိမ်တော်ရာတိုက်၊ သီရိဇေယျုံကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသီလာစာရ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ဓမ္မာလင်္ကာရကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တအဂ္ဂဝံသ နှင့် စာချဆရာတော်များ၊ ခရမ်းမြို့၊ ပါဠိတက္ကသိုလ် ကိုင်းကုန်း ကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကေလာသနှင့် စာချဆရာတော်များ၊ ပဲခူးမြို့၊ သာသနာ့မဏ္ဍိုင် ပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာဇောတ၊ ဘဒ္ဒန္တသံဝရနှင့် စာချ ဆရာတော်များ၊ နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိ သာသနာ့တက္ကသိုိလ် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတာဘိဝံသ၊ ဘဒ္ဒန္တဝဏ္ဏိတ အမှူးပြုသော သင်ကြားစီမံဆရာတော်များ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မဟာစည် သာသနာ့ရိပ်သာ နာယကဆရာတော်များနှင့် ကမ္မဋ္ဌာနာ စရိယဆရာတော်များ၊ ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင်၊ ဓမ္မာစရိယ ဦးအောင်ခိုင်၊ ဓမ္မာစရိယ ဦးမောင်မောင်လေး၊ ဆရာကြီး ဇေယျာမောင် ဦးကိုလေး၊ ဆရာကြီး ဦးတင်လွင်၊ ဆရာကြီး ဦးစံတင်၊ ဆရာဦးနန္ဒာသိန်းဇံ အစရှိသည့် ပြင်ပပညာရှင် ဆရာကြီးများ အထံတော်တို့တွင် ပရိယတ်၊ ပဋိပတ် ပညာရပ်များနှင့် လောကီပညာရပ်များကို အဆင့်ဆင့် လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
ဆရာတော် အောင်မြင်ခဲ့သည့် အောင်ပန်းများမှာ
သာသနတက္ကသီလမဟာဓမ္မာစရိယ M.A (ကျမ်းပြု)
B.A (Buddhist Studies, GGU, Korea) စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
ဆရာတော်သည် ပရိယတ်၊ ပဋိပတ်နှင့် လောကီပညာရပ် အဆင့်ဆင့်ကို လေ့လာသင်ယူ အောင်မြင်တော်မူပြီးနောက်
- ၂၀၀၁~၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိ သာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ ပိဋကတ်ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာဌာနတွင် အင်္ဂလိပ်စာ နည်းပြတာဝန်
- သာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောင်းဆောင်၏ အဆောင်မှူးတာဝန်
- ရန်ကုန်တိုင်း ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးသင်တန်းကျောင်း၏ အင်္ဂလိပ်စာနည်းပြ တာဝန်များအပြင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် လူငယ်လူရွယ်များအား ယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်းများနှင့် အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းများ သင်ကြားပို့ချပေးခြင်း
- ၂၀၀၄~ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ နုံးစန်းမြို့ ဂေါန်ဂန်းတက္ကသိုလ် (Geumgang University)တွင် အစိုးရ ပညာသင်ဆုဖြင့် (၅)နှစ်တိုင်တိုင် ကိုရီးယားဘာသာစကားနှင့် မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာကို လေ့လာဆည်းပူးရင်း ကိုရီးယားရောက် မြန်မာများနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတို့အား တရားဓမ္မ ဟောပြော ပြသပေးခြင်း
- ၂၀၀၈ခုနှစ်မှ စတင်ကာ “မနာပဒါယီ” (နှစ်သက်ဖွယ်ကို ပေးလှူခြင်း)ဟူသော အမည်ဖြင့် အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် ဘာသာရေးစာပေများ ရေးသားမျှဝေကာ (၂၀၁၀)ခုနှစ်တွင် “မချစ်မမုန်း အကောင်းဆုံး”ဟူသော ပထမဆုံး ဆောင်းပါး ပေါင်းချုပ် စာအုပ်ကို စတင်ထုတ်ဝေ၍ ဓမ္မစာပေ ပြန့်ပွားရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (လက်ရှိအချိန်တွင် ဓမ္မစာအုပ်ပေါင်း (၈)အုပ်ကျော်ခန့် ထုတ်ဝေပြီး ဖြစ်သည်။)
- ၂၀၀၉ခုနှစ် (၁)လပိုင်း (၂၆)ရက်နေ့တွင် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၊ ဒယ်ဂူးမြို့၌ “စိတ္တသုခမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို” စတင်တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်ကာ ပဓာနနာယက ဆရာတော်အဖြစ် တာဝန်ယူလျက် ကိုရီးယား၊ မြန်မာ သာသနာပြု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း
- ၂၀၁၁ခုနှစ်မှစတင်၍ “မနာပဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ (ကိုရီးယား)” ဟူသော အမည်ဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်း တရားပွဲ များအား လက်ခံဟောပြောကာ နယ်လှည့်ဓမ္မကထိက တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိခြင်း
- ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ (၁)လပိုင်း (၁၅)ရက် (၃၈)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့တွင် “မနာပဒါယီ ဖောင်ဒေးရှင်း”ကို ဦးဆောင်မတည် တည်ထောင်၍ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ ထူးချွန်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ကျောင်းပြီးသည်အထိ ပညာသင်ဆုပေးခြင်း၊ ပရဟိတ ပညာဒါန လုပ်ငန်းများနှင့် ဓမ္မစာပေ ပြန့်ပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း စသည့် သာသနာပြု လုပ်ငန်းများကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။
ဆရာတော်သည် ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ မြို့မကျောင်းလမ်း၊ အိမ်တော်ရာကျောင်းတိုက်၊ သီရိဇေယျုံကျောင်းနှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဒယ်ဂူးမြို့၊ စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတို့၏ ပဓာန နာယကဆရာတော်အဖြစ် တာဝန်ယူကာ တရားဟော တရားပြ၊ စာရေးစာချလုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ သာသနာပြု ဓမ္မကထိက တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်တော်မူရင်း “မနာပဒါယီ”ဟူသော အမည်ဖြင့် http://www.venvicitta. com http://www.facebook.com/ashinvicitta http://cafe.naver.com/cittasukha စသည့် အင်တာနက် စာမျက်နှာတို့မှလည်း ဓမ္မစာပေများ ရေးသားမျှဝေကာ အွန်လိုင်း သာသနာပြု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင် ဒဂုံမြို့နယ်၊ မြို့မကျောင်းလမ်း၊ သီရိဇေယျုံကျောင်းတွင်လည်း “မနာပဒါယီ ပညာရေးစင်တာ”ကို ဖွင့်လှစ်ကာ ဘာသာစကား သင်တန်းများနှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း သင်တန်းများကို အခမဲ့ ပညာဒါနပြုပေးလျက်ရှိသည်။